an nau ni yawngatsaw ra myit ni gaw tsawm htap la ai ri da maka zawn mahkri shawn gyet rai yang she awng dang lam hte tsawm htap ai Jinghpaw Wunpawng myu sha maka byin tai lu na re
Myen Laika Ngau Ni
Shingni Sumla Ni
JINGHPAW KASA: SHINGRAN YU GA
Posted by gindai zau at 20:52
JINGHPAW KASA: DINGDUNG GINWANG HTA COMPUTER JAWNG NGA SAI
Posted by gindai zau at 20:50
ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဘော်ဒါကျောင်းများ
Posted by mghtanngyi on November 8, 2011 at 6:40pm
Message ပို့ မယ် View Blog
အမေရိကန် သတင်းသမား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆစ်ဒနီ ဂျေ ဟားရစ် ဆိုသူက ''ပညာရေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပြတင်းတံခါးတွေကို အလင်းတံခါးတွေ ဖြစ်အောင် မှန်တွေတပ်လိုက်ဖို့ပဲ'' လို့ ပြောသွားတဲ့စကား မှတ်သားလောက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလောကကြီးကို ရှုမြင်နိုင်အောင် ဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်အောင် ကြည့်ခွင့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပညာရေးကို
တံခါးပိတ်၊ အလုံပိတ်မထားဘဲ ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မြင်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
matut hti na
Posted by gindai zau at 08:31
Labels: Jak hpaji
Katsu Mare masha ni hpe Myen Hpyen ni hkap gap myu shayi langai mi mat taw
Tuesday, 08 November 2011 07:32 nawla
Ka Ai;Kachin Review
Laiwa sai Bat Langai ya October 31,2011 ya jahpawteKatsu mare masha ni rai nga ai Hpauma Hkawn Tawng asak 35 jan, Hpaudau Tu, Htingnan Gam hte kaga langai ( mying n chye lu ai) ni hpe Hka La Ya mast 390 katsu mare kata shani wa yang hkap gap ai re lam chye lu ai.
N dai marai mali gaw mare shingan tinangayi yinwa hkan lagim machyu rawng taw ai raitim lu sha ni n nga wa ai majaw mare de bai wa yu ai lam htaebyin wa ai re lam chye lu ai. N dai marai mali gaw dai jahpawt maga dawemare de shani wa ai shaloi Sama Hkalup Hpung Ginwang ginjaw rung makau Lisu hkap lup hpung naw ku jawng shing duedu wa ai ten myen hpen la ni mu dat nna hkap gap ai re lam mung chye lu ai.Dai zawn Myen ni hkap gap ai shaloi shanhte marai mali gaw dum bri dum bra rai hprawng mat wa ai kaw nna marai masum gaw shanhteashara yinwa ni de bai du wa ma ai raitim yawngashawngehkawm nga Hpauma Hkawn Tawng dai ni du hkra n pru wa shi ai lam chye lu ai.
Posted by gindai zau at 07:41
သူတို့ ရဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းများကို စတင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
သားရဲတိရိစ္ဆာန်တို့ အန္တရာယ်တွေက ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် မရှိမဖြစ် ဖွဲ
ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သည်လိုစုဖွဲ့ နေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာ
မရှိသလို အုပ်ချုပ်ပုံ စည်းမျဉ်းဥပဒေများလည်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့ သော် လွန်ခဲ့သော
(Mesopotamia) မြောက်ပိုင်းဒေသများမှာ လူမူရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ
နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ လူတွေဟာ မြို့ ပြတွေကို
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတွေကို အစပြုကျင့်သုံးလာရပါတော့တယ်။ မြို
တိုးပွါးလာသော လူဦးရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေကို
တရားဥပဒေအကျုံးဝင်သော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့ က အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို
သည်လို သင်္ဘောတစီးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ထပ်တူတင်စားမူမျိုးကို ပလေးတိုးနဲ့ 
တို့ ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၄၀၀) ကအရေးအသားတွေမှာ the ship of state
Posted by gindai zau at 16:37
Labels: Myen Laika Ngau Ni
လူတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘတွေကို အောက်ကစကားဆယ်ခွန်းထဲက တစ်ခွန်း
ဒါမှမဟုတ် တစ်ခွန်းထက်ပိုပြောခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သားသမီးဖြစ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့က မိဘတွေကို ဒီစကားတွေကိုထပ်မပြောတော့ဘဲ နားလည်ပေးကြရအောင်..
လူ့ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နံဘေးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ချစ်သူခင်သူ၊
သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားမှ သူတို့က သင့်ဘဝမှာ
သိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ မိဘတွေကို ရိုသေလေးစားပါ။ သင်ဘာအမှားပဲလုပ်လုပ်
သူတို့က သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ မိဘရဲ့ရင်ခွင်ဟာ သင့်အတွက်
မယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုချဖို့ပဲ မလောပါနဲ့) (၃) ပြောရင်လည်း နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့! (၄) မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထပ်ထပ်ပြောထားရက်သားနဲ့..... လုပ်ထားတာတွေကလည်း မကောင်းဘူး။ (သူတို့အင်အားနဲ့မမျှတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ဂရုတစိုက်နဲ့ သူတို့ကိုမလုပ်ဖို့တားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ သူတို့အသုံးမဝင်တော့ကြောင်း သူတို့ကိုခံစားစေပါတယ်) (၅) ဟာ.. ဖေဖေ၊ မေမေတို့နည်းက ခေတ်တုံးနေပြီ။ (မိဘတွေရဲ့အကြံဉာဏ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အသုံးတည့်ချင်မှ တည့်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားကို ကျွန်တော်တို့ပြောသင့်ပါတယ်)
Posted by gindai zau at 15:49
MYEN HPYEN NI CHEMICAL WEAPON HTE SHANGLAWT HPE GASAT (Burmese Military uses Weapons Of Mass Destruction against KIA Soldiers)
Posted by gindai zau at 16:29
အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံမဵားကို လ္တြွိႚဝကြ်ုကည့်႟နြည်း
လတ်ြလပ်တဲ့ အာရအြသံ(RFA)ရဲ့ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံမဵားကိုမန်မာူပည်တငြ်းကုကည့်လိုႛ မရအောင် ပိတ်ဆိုႛထားပၝလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုရင်၊ http://www.rfa.org/burmese ကို မုကည့်ိုံင်အောင် လုပ်ထာိးိုံင်ပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့၊ အဲဒီ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံကို တိုက်႟ိုက်မသြားပဲ proxy server လိုႛ ခေၞတဲု့ကားခံကန်ြပဵတြာ ဆာဗာစနစ်ကို အသုံူးပ္ဘြပီုးကည့်႟ြိုံင်တဲ့ နည်းလမ်းရြိပၝတယ်။
အဲဒီလိုကားခံ ကန်ြပဵတြာဆာဗာကတဆင့် သြားမယ်ဆိုရင် ပိတ်ဆိုႛထားတဲ့ အင်တာနက် စာမဵက်ြိာံတေကြိုကည့်ိုံင်တဲ့အူပင် ဘယ်သူဘယ်ဝၝမနြ်းလည်း မသိုံင်ပၝဘူး။ ကန်ြပဵတြာ အသုံူးပသြူဟာုကားခံကန်ြပဵတြာထဲကို ဝင်္ဘပီးတဲ့နောက် ကိုယ်ယောင်ဖေဵာက်္ဘပီးတော့ တူခား ပိတ်ဆိုႛထားတဲ့ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တေကြို သြားတဲ့ သဘောမဵြိးပၝ။
အခုလိုကားခံဆောင်႟က်ြပေးမဲ့ ကန်ြပဵတြာ ဆာဗာတေကြို အင်တာနက်ဝက်ဘ်ပေၞမြာ ရြာဖြေိုံင်တဲ့ နည်းလမ်းတြေ ရြိပၝတယ်။
Google, Yahoo, MSN/Live စတဲ့ ရြာဖေရြေးစနစ်တခုခုကို သုံး္ဘပီး ရြာရမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ရြာရမဲ့ စာလုံးတေကြတော့ nph-proxy ဒၝမမြဟုတ် nph-proxy.pl ဒၝမမြဟုတ် nph-proxy.cgi တိုႛိကို ႟ိုက်ထည့်္ဘပီး ရြာုကည့်ပၝ။
Posted by gindai zau at 07:28
LUNG ZUP KADAWNG NA MYEN HPYEN NI HTINGNUT
October (28) bat Manga,
Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaKIA Share shagan ni hte myen tai hpyen ni Lung Zep Kadawng kaw gap gasat ai hta myen de na hkrat sum ai lam grai law wa ai majaw myen tai hpyen ni bai htingnut mat wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai majan hta myen de na marai (20) ram hkrat sum nna, marai (60) ram hkala lai wa sai hpe na chye ...lu ai.
Dai hte maren Hkawan Bang (Kyauk Sahkan) kaw mung myen ni nau hkrat sum wa ai majaw ya ten htu gasat ai lam hpe jahkring da ai lam shiga na chye lu ai.
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်လမ်းပိုင်း လုံဇပ်တောင်တွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာစစ်တပ်တို့ ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ အကျအဆုံးများပြာလာမှုကြောင့် ဗမာစစ်တပ်မှာ တပ်ဆုတ်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤစစ်ပွဲတွက် ဗမာစစ်အစိုးရဘက်မှ စစ်သား (၂၀) ခန့်ကျရှုံးပြီး (၆၀) ခန့် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ထို့အတူ ဗန်းမော် လွယ်ဂျယ် လမ်းပိုင်း ကျောက်စခန်း တိုက်ပွဲတွင်လည်း ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ အကျအဆုံးများလာ၍ ယခုအခါ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ရပ်ဆိုင်း ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by gindai zau at 13:17
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ကျနော်သိထားသမျှ (၁) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
Posted: 19 Oct 2011 12:01 PM PDT
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြီးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် လူမိုက်လုပ်ပြီး ဗွီတိုဆန်ဆန် ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် ပြည်သူအားလုံး စိတ်ချမ်းသာမှု ရသွားကြရပါတယ်။ တရုတ်အလိုတော်ရိတွေ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ လာဘ်စားထားသူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေ ဗမာမဟုတ်သူတွေအတွက်တော့ နားထဲကို သံရည်ပူ လောင်းချသလို ခံစားကြရမယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာမဟုတ် လောဘကဇိ့ တက်နေသူတွေ အတွက် အမင်္ဂလာသတင်းပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူအားလုံး အတွက်က အနိုင်းမရနိုင်တဲ့ အောင်ပွဲပါ။
Posted by gindai zau at 07:50
MASHA HPE DING LIK CHYE AI NI
U la gaw Gawla-uk Uau di langai hpe shian ta de la shang wa nna shiama du jan u yi ni hpe tsun ai gaw
"Nan hte ni hpe ngai mara n kam shagun ai, yu mu n dai masha ni gara hku bungli galaw ai ngu hpe yu da mu" nga ai
REf: Gyo Lin Pya: Vol (52) December, 2008
Posted by gindai zau at 06:08
Labels: Gindai N'ta, Sumroi
Dangdi ai maga hku na mungkan shara shagu nga ai myu sha ni hpang, shana shabra, shiga hting let ya lu ai blog langai byin tai lu hkra shakut taw nga nngai
Janmai Kawng Majan
Matsan mayen An hteaLamu ga
Chyu Tauba ( Annau niaKanu Mungdang Annau ni hpe La nga ai )
Tekshi Myit Tazin
Interview with Sawbwa Sai Kyar Sai's Wife
Hpyen Yen Tsinyam
Hpyen yen tsing yam 1
Hpyenyen Tsinyam 2
KIO/KIAapadang sumla hkrung
Jinghpaw Myu Sha niaShingni hte magup sumhpa
GPMN God Procreated Music and Nation
IDPs Sumla Jinghpawkasa Kawn
Sumla Hkrung Jinghpawkasa kawn
Jinghpaw MP3 Mahkawn Ni
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ကျနော်သိထားသမျှ (၁) (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) Posted: 19 Oct 2011 12 :01 PM PDT မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ကျနော...
WUNPAWNG BUGA NANG HPE MYIT DUM NGA AI
Yawng Hpe Shahkram dat ai Tsaw ra ai Myu Wunpawng shani e, kalang mi bai ngai na n dai www.gindai.blogspot.com de ya she bai lu shang wa ai...
Shai Mat Sai
Shai Mat Sai Moi kawn n tara dip hkrum sha, Shinggyim hkaw hkang hkrat sum da; Matsan tsan ai degree htum, Sak hkrung lam hta shoi m...
gindai.blogspot.com. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.